HRW urges Bangladesh to allow Rohingya stranded on boats to come ashore
The Bangladesh government should immediately allow hundreds of Rohingya refugees stranded in two trawlers in the Bay of Bengal to come ashore, Human Rights Watch has said.
The stranded Rohingya need necessary food, water, and health care, the human right group said inastatement on Saturday, citingaUNHCR warning that the Rohingya may have been at sea for weeks without adequate food and water.
Labels: 2020, Boat People, en, HRW, News, Rohingya
ကမ္ဘာတဝန်း COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး ဖြတ်တောက် ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ လူ့အသက်တွေ မဆုံးရှုံးစေရအောင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, AA, Covid-19, HRW, mm, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်ပြည်နယ်, သတင်း, အင်တနက်
As your report makes clear, the pitfalls of such an approach are numerous: the lack of definitional clarity around concepts such as “extremism” and “deradicalization” is often used asacloak for sweeping rights violations. Restrictive policies and programs are often based more on stereotypes than science.
Labels: 2020, en, HRW, News, Rohingya, UN rights body
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရကဖွဲ့တဲ့ ICEO လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော် မ ရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ နိုင်ငံတကာမှာ အပြကောင်းအောင်နဲ့၊ လာမယ့် ICJ တရားခွင်အတွက် ပြင်ဆင်မှု သာဖြစ်တယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့က ဝေဖန်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ဖြစ်ရပ်ကြီးကို ဖော့ပြောဖို့ ကြိုးစားထားသလို၊ ကော်မရှင်စုံစမ်းမှုဟာ ပွင့်လင်းမြင် သာ မှုမရှိဘူးလို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။ HRW ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို ကိုသားညွန့်ဦး ပြောပြမှာပါ။
Labels: 2020, HRW, ICOE, mm, ထုတ်ပြန်ချက်, ဗွီအိုအေ, သတင်း, ဝေဖန်တုံ့ပြန်
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရကဖွဲ့တဲ့ ICEO လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေး ကော်မ ရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ နိုင်ငံတကာမှာ အပြကောင်းအောင်နဲ့၊ လာမယ့် ICJ တရားခွင်အတွက် ပြင်ဆင်မှု သာဖြစ်တယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့က ဝေဖန်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ဖြစ်ရပ်ကြီးကို ဖော့ပြောဖို့ ကြိုးစားထားသလို၊ ကော်မရှင်စုံစမ်းမှုဟာ ပွင့်လင်း မြင် သာမှုမရှိဘူးလို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။ HRW ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို ကိုသားညွန့်ဦး ပြောပြမှာပါ။
Labels: 2020, HRW, IOCE, mm, ဗွီအိုအေ, သတင်း, အစီရင်ခံစာ, ဝေဖန်တုံ့ပြန်
မြန်မာ- ရိုဟင်ဂျာများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားစီ ရင်မှု တောင်းခံခြင်း
ဇန်နဝါရီလ 14, 2020
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအပေါ် ဖြိုခွင်းမှု တင်းကျပ်လာခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကောက်စစ်ဘဇား၌ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ စားသောက် ဆိုင် တစ်ခုတွင် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ ICJ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ကြည့်နေကြသည်။ © 2019 Allison Joyce/Getty Images
(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ဘန်ကောက်မြို့) - မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အခြားတိုင်း ရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရား စီရင်မှုအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖိအားတိုး၍ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း (လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့) Human Rights Watch က ၎င်း၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာ တွင် ယနေ့ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်အ တွင်း အာဏာပိုင်များက ဖိနှိပ်ချုပ် ချယ်သည့် ပြစ်မှုဥပဒေများကို တိုးမြှင့်၍အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် လွတ် လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့်တို့သည်လည်း သိသာစွာ ချဆင်းခဲ့ပါသည်။
Labels: 2020, HRW, mm, တရားစီရင်ရေး, ရိုဟင်ဂျာ, အစီရင်ခံစာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကောက်စစ်ဘဇား၌ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုတွင် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ ICJ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ကြည့်နေကြသည်။ © 2019 Allison Joyce/Getty Images
(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ဘန်ကောက်မြို့) - မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အခြားတိုင်း ရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားစီရင် မှုအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖိအားတိုး၍ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း (လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့) Human Rights Watch က ၎င်း၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာ တွင် ယနေ့ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်အ တွင်း အာဏာပိုင်များက ဖိနှိပ်ချုပ် ချယ်သည့် ပြစ်မှုဥပဒေများကို တိုးမြှင့်၍အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် လွတ်လပ် စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့်တို့သည်လည်း သိသာစွာ ချဆင်းခဲ့ပါသည်။
Labels: 2020, HRW, mm, မြန်မာ-ရိုဟင်ဂျာ, အစီရင်ခံစာ, အပြည်ပ်ြညဆိုင်ရာတရားစီရင်မှု
ICJ အမှုအတွက် The Hague ကို ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆောင် ရွက် သူတွေရောက်
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပေါ်နေတောကို ဟန့်တားဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့တွက်ကြောင့်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ The Hague မြို့က နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ စွဲဆိုထားတဲ့အမှုကို ဒီက
နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင် ကြားနာတော့မှာပါ။
Labels: 2019, HRW, ICJ, mm, Param Preet-Singh, The Hague, ဗွီအိုအေ, သတင်း
Labels: 2019, en, Gambia, HRW, ICJ, News, Q & A
Rohingya children in the Balukhali camp in Cox's Bazar Bangladesh on February 14, 2019. Kazi Salahuddin Razu—/NurPhoto/Getty
Labels: 2019, Bangladesh, Denied, Education, en, HRW, News, Time
Labels: 2019, Bangladesh, Denied, Education, en, HRW, Rphingya
Freedom of movement: HRW demands release of 30 Rohingyas held in Myanmar
Labels: 2019, en, HRW, Myanmar, News, Rohingya
Labels: 2019, en, HRW, Myanmar, News, Rohingya, Travelling
Rohingya refugees gather behindabarbed-wire fence in the “no-man’s land”
border zone between Myanmar and Bangladesh, April
25, 2018. © 2018 Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
Labels: 2019, Bangladesh, Barbed Wire fences, en, HRW, News, Rohingya Refugee
Published Online: Sep 08, 2019
Labels: 2019, Bangladesh, en, HRW, Internet, News, Rest, Restrictions, Rohingya Camp
ဂူတာပြင်ရွာလူသတ်မှုအတွက် တပ်မတော်က စစ်ဆေး ရေးခုံရုံးဖွဲ့တဲ့အပေါ် HRW သံသယဖြစ်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ ဂူတာပြင်ကျေးရွာဝန်းကျင်ကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြစဉ်။Photo: MOI
■ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဂူတာပြင်ကျေးရွာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ရွာသား ၄ဝဝ လောက်အထိကို သတ်ဖြတ် ခဲ့ တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးပြီး အရေးယူ အပြစ် ပေးဖို့ စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ သံသယရှိကြောင်း နယူး ယောက်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, HRW, mm, ဂူတာပြင်, စစ်ဆေးရေးခုံရုံး, တပ်မတော်, သတင်း